Le drone izokuvumela ukuthi ukhokhise imoto yakho kagesi uma uphelelwa ibhethri | Izindaba zamagajethi
Ukuthi izimoto ezisebenza ngogesi ikusasa yinto abambalwa kakhulu kithi abangabazayo namuhla. Ukuthi inkinga yempilo yebhethri nayo ibonakala ikude nokuxazululwa yinto abasebenzisi abaningi futhi abangabazayo. Impilo yebhethri ihlala icishe ifane neminyaka eyi-10 eyedlule, ubuchwepheshe obubonakala sengathi isikhathi asidluli.
Ngenkathi kuvivinywa amabhethri amasha ukukhulisa umthamo wokugcina, ezinye izinkampani zibheke esikhathini esizayo, zakha amadivayisi avumela izimoto zikagesi, ukwazi ukuqala kabusha uma bephelelwa ibhethri. Isibonelo esicacile yi-drone ezosivumela ukuthi sikhokhise imoto yethu kagesi uma kunesidingo.
Inkampani yaseBaek isebenza kuhlelo lokusiza eceleni komgwaqo lwezimoto zikagesi ezizogcina ziphelelwe yibhethri ngendlela ye-drone. Umsebenzi ulula kakhulu, ngoba kuzodingeka sikwenze kuphela cela usizo ngohlelo lokusebenza lweselula, isicelo esisebenzisa indawo yocingo, singasithola ngokushesha ukusinikeza imali edingekayo ukuze sikwazi ukufinyelela esiteshini senkonzo lapho singashaja khona imoto yethu.
I-drone uqobo izofaka imodeli yokuxhuma ehambelana nemoto, okungenani kuze kube yilapho imboni ifuna ukuvumelana ngemodeli eyodwa yokuxhuma, isixhumi esizodingeka ukuthi sisikhiphe ku-drone bese sixhuma emotweni yethu. Ubukhulu be-drone bekungeke kube yilokho okuthiwa kuncane, ngoba kufanele kuhlanganiswe ibhethri elinamandla anele ukuvumela ukushaja ingxenye yebhethri lemoto ukuze likwazi ukufinyelela endaweni yokushaja eseduze.
Umqondo ngokwawo awumubi, kepha ukuze lolu hlobo lwe-drone lubone ukukhanya, inkampani kuzofanele ifinyelele ezivumelwaneni eziningi zezohwebo ukuze ikwazi ukutholakala kulo lonke izwe. Kepha, le nkinga ingaxazululwa futhi ukuphatha ibhethri langaphandle emotweni uqobo esingayisebenzisa kuphela ezimweni ezithile. Ngaphezu kwalokho, akunakwenzeka ukuthi umnikazi wemoto kagesi azoqapha kancane lapho ethatha uhambo azi ukuthi imali ekhokhiswayo ayanele.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Le drone izokuvumela ukuthi ukhokhise imoto yakho kagesi uma uphelelwa ibhethri
Lokhu kubukeka kanjena kokuvela okusha kwesitimela sezinhlamvu zaseJapan, umshini okwazi ukufinyelela ku-360 km / h